IHydraulic Hydro Radial piston motors intengo yakamuva, uMenzi
Umkhiqizi weHydraulic hydro radial piston motors
IHydraulic motor torque ephezulu iyathengiswa
Njengabakhiqizi bezimoto ezihamba ngejubane eliphakeme kakhulu abakhiqizi bezimoto, sinikeza zombili isivinini esingaphansi nesiphezulu se-hydraulic motors. Cabanga ngezinsizakusebenza zethu ze-hydraulic yazo zonke izinhlobo nokulungiswa kokuqamba okungenzeka.
Imikhiqizo yethu esishisayo nensizakalo
IHydraulic uwoyela motor High ingcindezi ukumelana
Amafutha we-hydraulic pump high pressure, High-Pressure Vane Motors, Hydraulics & Pneumatics, Variable Displacement Hydraulic Motors enzelwe amasekethe avulekile navalwe. nge-cycloidal structin nangejubane eliphansi iChief Compact Hi-Torque Motor!
Ama-motor amancane we-hydraulic motors
Isakhiwo silula, ukubukeka kuyinoveli, ukuqina kwesivinini eliphansi nokuphila kwenkonzo ende yimikhiqizo yokuqala yokushintsha imoto engenisiwe. isakhiwo esihlangene, isisindo esikhanyayo namandla okuqina aphezulu. Ikhwalithi ephezulu encane neCompact hydraulic motor Factory Yenzelwe ukudayiswa.
IHydraulic motor ene-torque ephezulu ngejubane eliphansi
phezulu-ingcindezi isivinini esiphansi se-torque ephezulu yokukhiqiza izimoto, enokuthembeka okuphezulu kwamandla, modularity nokuklanywa kwezomnotho. Isivinini esivela ku-110-1450rm, Thenga ama-High Torque Motors ngentengo engcono kakhulu evela kithi. Ama-axial kanye ne-radial piston motors.
Isivinini esiphezulu se-Hydraulic motor
Sineminyaka eminingi yokuhlangenwe nakho kokukhiqiza futhi siyinkampani efanelekayo yokukhiqiza. Isivinini esiphezulu se-hydraulic drive motor, i-High Torque Hydraulic Motors, i-Rotal Integral ne-stator, ibanga lezempi elinamandla kunawo wonke, elinokwethenjelwa nelisebenza kahle ngaphansi kwamanzi ama-motor wokubacindezela.
Yiziphi motors hydraulic ukuthenga?
Sinikeza ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme, ephansi. 50 hp motor wokubacindezela, 540 rpm motor wokubacindezela, 20 hp motor wokubacindezela, ngisho 10,000 ngomzuzu motor wokubacindezela. Iminyaka yokwenziwa kwemoto isipiliyoni sokukunikeza kuphela ikhwalithi ephezulu nemoto eqinile. China isivinini esiphansi torque ephezulu umfutholuketshezi abakhiqizi.
Kuyithuluzi eliguqula umfutho wokubacindezela lize liye ekunyakazeni kokujikeleza. Uketshezi olusebenzayo kungaba ngamanzi noma, ngokujwayelekile, i-hydraulic fluid. Ama-hydraulic motors aguqula amandla kagesi wamanzi abe amandla ajikelezayo. Ngokuvamile, ama-motor wokubacindezela abekwa kokunye kwezigaba ezimbili: isivinini esikhulu, i-torque ephansi (i-HSLT) noma isivinini esiphansi, i-torque ephezulu (i-LSHT).
Uma unemikhiqizo oyithandayo, woza uxhumane nathi! Sikulungele futhi sibheke phambili ekubambisaneni kwethu.
Ake siqhubeke futhi